Taarkaanfilee Miseensotiin Gumii Sabaa ABO har’a fudhatan nii tumsina! – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooTaarkaanfilee Miseensotiin Gumii Sabaa ABO har’a fudhatan nii tumsina!
Qeerroo Bilisummaa Oromoo, Hagayya 11, 2020
Qeerroon Bilisummaa Oromoo Uummata keenya Oromoo waanjoo cunqursaa jalaa bilisa baasuuf dhaaba cichee hojjetu ABO jala hiriirree sochii taasifnuun, akeeka dhaaba keenyaan heeraaf naamusa inni ittiin nu barsiise qabannee sochii qabsoo bilisummaa taasisna. Adeemsa kana keessatti kanneen kayyoo ABO gufachiisuuf warraqaan kamiinuu dura kan dhaabannu ta’uu hubachiisaa, sochii seer-dhablummaa hogganooti ABO taasisaa turan ilaalchisees murtii hogganootiin keenya miseensotiin gumii sabaa ABO har’a Hagayya 11,2020 fudhatan kan qabsicha utubu ta’uu isaatti amanna. Tarkaanfii Gumiin sabaa ABO qaamota tibbana burjaajjii uumuuf yaalan irratti fudhatan nii tumsina.
Qaamota Heeraaf Seera dhaaba keenya ABO daddabsuuf sharafuu yaalu mara duras nii dhaabbanna. Akeeka Oromoon qabu kan ABO’n ofitti fudhatee waggoota dheeraaf qabsaa’aa tureef itti jiru galiin gahuufis dirqama nutti laatame bahachuu keenya itti fufna. Kanneen maqaa dhaaba keenyaa balleessuuf xureessuuf yaalan dura dhaabbataa akka turre, fuulduraafis kan dura dhaabbannu ta’uu hubachiisaa, mariis ta’ee murtii dhaabni keenya ABO’n hinbeekne qaamni kam murteessuu akka hindandeenye uummataaf ibsina.
Haaluma kanaan murtii marii bal’aadhaan guyyaa har’aa hogganoonni olaanoo ABO fi miseensonni Gumii Sabaa ABO biyya keessaaf biyya alaa qaamota tibbana burjaajjii uuman kanneen akka itti aanaa HD ABO jaal Araarsoo Biqilaa, Jaal Jabeessaa Gabbisaa, Jaal Toleeraa Adabaa, Jaal Atoomsaa Kumsaa, Jaal Ibsaa Nagawoo fi Jaal Qajeelaa Mardaasaa irratti dabarse nii tumsina. Akkuma hogganoonni keenya har’a nuuf akeekanitti hanga koreen seeraaf tohannaa murtii isaa uummataaf ifa godhutti kanneen olitti maqaan caqafame kana irraa dirqamas kan irraa hinfudhanneef hangasitti quunnamtii keenya irraa kutnee jiraachuu uummataaf ifa goona.
Kana bu’uura godhachuun adeemsa Adooleessa 26, 2020 asitti mooraa qabsoo Bilisumma Oromoo ABO dhaan taliigamu keessatti adeemaa jiru duuba qaamni mootummaa shiraan ABO diiguuf harka isaa itti naqatee jiru daddaffiin keessaa akka harka fudhatu gaaffanna. Abbaan qabsicha kanaa Uummati keenya Oromoonis shira mootummaa EPRDF’n adeemaa jiru kana hubachuudhaan qabsoo bilisummaa taasisu tikfataa akka asiin gahe fuulduraafis tikfachuu akka qabu nuti Qeerroo Bilisummaa Oromoo dhaammanna.
IBSA TEESSUMA GUMII SABAA ABO Bitootessa 20, 2021 Addi Bilisummaa Oromoo, Bitootessa 17 irraa hanga…